Breaking News: အမေရီကန်သံအမတ်UN အ ဖွဲ့အ စည်း နှင့် INGO အ ဖွဲ့ အ စည်း များ သည် ရပ်ကွက် ရှိ ရို ဟင် ဂျာ တိုင်း ရင် သား များ နှင့် တွေ့ ဆုံ ခြင်း | Burma Muslim
Breaking News: အမေရီကန်သံအမတ်UN အ ဖွဲ့အ စည်း နှင့် INGO အ ဖွဲ့ အ စည်း များ သည် ရပ်ကွက် ရှိ ရို ဟင် ဂျာ တိုင်း ရင် သား များ နှင့် တွေ့ ဆုံ ခြင်း
By burmamuslim on December 17, 2013
ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့ အောင်မင်္ဂလာရပ်ကွက်သို့ ရောက်ရှိခဲ့သော အမေရီကန် သံအမတ်UN အဖွဲ့အစည်း နှင့် INGO အဖွဲ့အစည်းများသည်ရပ်ကွက်ရှိ ရိုဟင်ဂျာ တိုင်းရင်သားများနှင့် တွေ့စုံခဲ့ကြောင်း မည်သည်အစိုးရအဖွဲ့စည်းမှ အတားစည်းမလုပ်ခဲ့ကြောင်း ဒေသာခံများမှ သိရှိရပါသည်၊၊ ဆွေးနွေးမူတွင် ရိုဟင်ဂျာ တိုင်းရင်သားများ၏ လက်ရှိအခြေအနေ စားဝတ်နေရေး ၊ ကျန်းမာရေး ၊ အလုပ်အကိုင် ၊ အကြမ်းဖက်ခံရမူ စသည်တို့ကို အသေးစိတ်မေးမြန်းခဲ့ပါသည်၊၊ ထို့နောက် ရိုဟင်ဂျာတိုင်းရင်သားများ၏ နေထိုင်ရေးကို ကွင်းဆင်လေ့လာခဲ့ရာ ရိုဟင်ဂျာအမျိုးသမီးတစ်ဦး၏ အိမ်သို့ရောက်ခဲ့သည်၊၊ ထို့အိမ်တွင် ပြည့်ပ အဖွဲ့စည်းများက စားဝတ်နေရေးကို မေးမြန်းခဲ့ရလက်ရှိစားသောက်နေသော ဟင်းအိုး ထမင်းအိုးများကို ဖွင့်ကြည့်ခဲ့သည်၊၊ ထိုနောက်ကယ် ဆယ်ရေး အဖွဲ့မှ ပေးထားသော ပဲ ဆန်း များကို ယူုပြာ ခဲ့သည်၊၊ ဟောင်းနွမ်းနေသောပဲ ဆန်းများကို ကြည့်၍ သင်တို့ဤအစားအသောက်များကို ဘယ်လို့စားနေ တာလဲ ရောဂါ တွေ ရကြမှာပေါ ,ရိုဟင်ဂျာ အမျိုးသမီးက ဘယ်လို့ လုပ်ရမလဲ ရတာတွေနဲ့ လမ်းဘေးကပေါက်တဲ့ အရွက်တွေကိုပဲ စားနေတာပါ, ဒါတွေမစားဘူးဆိုရင် ကျွန်မတို့အသက်က ရှင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး ယခင်ကတော့ ကျွန်မတို့ အမျိုးသားတွေ ကျပန်းအလုပ်တွေကို လုပ်ကိုင်ပြီး ကောင်းမွန်းစွာဖြင့် စားသောက်ခဲ့ပါတယ် ယခုအချိန်မှာ အပြင်ကိုလဲ ထွက်လိုမရဘူး ထွက်လို့ရခိုင်တွေက တွေ့ခဲ့ရင် အသက်ပါ မချမ်းသားပါဘူး။
ဒါကြောင်း ကယ်ဆယ်ရေးက ပေးတဲ့ အစားအသောက်တွေကို အမှီပြု စားနေတာပါ၊၊ထို့နောက် ရွာအတွင်းရှိ အိမ်များ ပျက်စီး နေပုံများကို လေ့လာခဲ့ရာ အနီအနားရှိ ရိုဟင်ဂျာတိုင်းရင်သားများကို မေးမြန်းခဲ့ရထို့အိမ်များက သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အိမ်တွေဖြစ်ပါတယ် ငွေကြေးလို့အပ်လို ထုခွဲပြီးရောင်နေတာပါ ယခင်ကဆိုရင် ထို့အိမ်က သိန်း ၄၀ , ၅၀ ရပါတယ် အခုက. ၁ သိန်း , ၂သိန်း လောက်ပဲ ရောင်းလိုရပါတယ်, ဒီအတိုင် ကြည့်နေမယ်ဆိုရင် ကျွန်တို့အသက်တွေ ရှင်နေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဒါတွေ ကို ရောင်းပြီး မိသားစုရဲ့လို့အပ်ချက်တွေကို ဖြည့်စည်းပေနေရတာပါ ဟုမျက်ရည်များစွာနဲ့ တင်ပြာခဲ့သူက မာမတ်ဆူတန်ဖြစ်ပါတယ်ထိုနောက် လုံခြုံရေး အဖြစ် လိုက်ပိုပေးနေသူ (ရိုဟင်ဂျာတိုင်းရင်သား) ကို မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်၊၊ မင်းတို့ရွာမှာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူက အစ္စလာမ်လာ ရခိုင်လာ ထို့ရိုဟင်ဂျာတိုင်းရင်
သား က ရခိုင်ပြည်မှာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူက အစ္စလာမ်မဟုတ်ပါဘူး ရခိုင်ပါပဲ ,အစ္စလာမ်ကိုအုပ်ချုပ်ရေးမှူပေးခဲ့တာ မရှိပါဘူး အမြင့်ဆုံးကရာအိမ်မှူး ဆယ်အိမ် မှူးပဲရှိ ပါ တယ် ထို့နောက်မင်းတို့မှ မှတ်ပုံတင်ရှိခဲ့လာလို့မေးခဲ့သည်ကို ထို့သူကပဲ ဆက်လက်၍ ဖြေဆိုခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို အဖိုးတွေ လက်ထပ်တုန်းက အမျိုး သား မှတ်ပုံတင်တွေ ရခဲ့ပါတယ်,လူမျိုးကတော့ အမျိုးမျိုးရေးခဲ့ပါတယ် တချိုးအစ္စာလာမ်တွေမှ ရိုဟင်ဂျာလို့ပေးခဲ့ပါတယ် တချိုကြတော့ရခိုင်မွတ်ဆလာင်မ် လို့ ပေး ခဲ့ပါ တယ် ကျွန်တော်တို့လက်ထပ်မှ အဖြူကဒ်ပဲပေးပါတယ် လူမျိုးကြတော့ ဘင်္ဂလီလို့ပေးပါတယ်နိုင်ငံတော်အစိုးရ က ပေးခြင်သလိုပေတာ ပါထိုကဒ်ပြား (အဖြူရောင်) တွေက ပေးကနီသူတို့ပြောခဲ့တဲ့စကားကို ကျွန်တော်အခုတိ မှတ်မိပါသေတယ်၊၊ထို့အချိန်တွင် UNအဖွဲ့စည်းမှာတစ်ဦးက စကားဖျက်၍ မေးပါ တယ်ဲသူတို့ဆို တာဘယ်သူကိုပြောတာလဲ ? လဝက ကို ပြောတာပါ လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်၊၊ကျွန်တော်တို့ ရှိဟင်ဂျာ တိုင်းရင်သားတွေပါ မနေ့တနေက ဘင်္ဂလားဒေရ်ှ့ ကဝင်းလာတဲ့ အနောက်သား ဘင်္ဂလီ ရခိုင်တွေကို တိုင်းရင်သားအဖြစ်လက္ခံပြီး ရှေ့နှစ်ပေါင်းများစွာက နေထိုင်လာခဲ့တဲ့ ကျွန်တော်တို့ ရိုဟင်ဂျာတိုင်းရင်း သားတွေကိုကြတော့ မနေ့တနေ့က ခိုးဝင်လာတယ်လို့စွတ်ဆွဲပြီး ကျွန်တော်တို့သမိုင်းဝင် အဆောင်အဦးတွေ ဘာသာရေး ဗလီတွေ သင်္ချီင်းတွေကိုဖျက်စီး မီးရှူး လူတွေကို အရှင်လတ်လတ် သတ်ခဲ့တယ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ သားသမီးတွေ ပညာသင်ခွင့်ကိုပိတ် စီးပွားရေး ကျန်းမာရေးလမ်းပန်ဆက်သွယ်ရေး တရပ်ကွက်နှင့် တရပ်ကွက် သွားလာခွင့်တွေကို တခုမကျန် ပိတ်ထားခဲ့တာ ကျွန်တော်သက်ပါပဲကျွန်တော်တို့ကတိရိစ္ဆာန်လို့နေ နေရာတပါ, ဒါတွေ သည်းမခံနိုင်လွန်း လို့ပင်လယ် ကိုဖြတ်ကျော်ပြီးနိုင်ငံခြား သွားနေတာပါ၊၊ကျွန်တော် တို့ရဲ့ဘ၀တွေကလူဖြစ်ကျိုးမနတ်ပါဗျား၊၊ ထို့နောက် UN အဖွဲ့စည်းမှ ကျွန်တော်ကို ပြောခဲ့သေတယ် မင်းတို့တွေ တစ်နှစ်ကျော်နှစ်နှစ်နီပါ ရှိနေပြီးပဲ သည်းခံလက်စနဲ့နောက်အချိန်နဲနဲ့ပဲစောင်ပါ,ရခိုင်တွေက အမျိုးမျိုး ကြိန်ခြောက်လာလိမ်မယ် မင်းတို့တွေ ဒီးရွာကို ကျော့ခိုင်ပြီး ထွက်မသွားကြပါနဲ့ အချိန်တွေက နီကပ်လာနေပြီး မျှမကြမီး မင်းတို့ လိုချင်နေတဲ့ အချက်အလက်တွေ တစ်ခုမကျန်ရရှိလာလိမ်မယ် သည်းခံပေးကြပါ စသည်ကဖြင့် ပြောကြခဲ့သည်၊၊
စစ်တွေမြို့မှာပေပို့ သောသတင်းအတိုင် ရေ၍မျှဝေလိုက်ပါသည်၊၊